Real Madrid oo u soo baxday wareegga 16-ka Copa del Rey, kaddib guul wayn oo ay ka gaartay Leonesa… + SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo u soo baxday wareegga 16-ka Copa del Rey, kaddib guul wayn oo ay ka gaartay Leonesa… + SAWIRRO
(Madrid) 30 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa guul ka gaartay naadiga Leonesa oo ay ku soo dhowaysay garoonka Santiago Bernabeu, waxaana Los Blancos ay si rasmi ah u xaqiijisatay booskeeda wareegga 16-ka Copa del Rey.
Los Blancos ayaa sii hor ciyaartay lugta hore ee wareegga 32-da kooxood, madaama ay bisha December ka qeyb galayaan Koobka Kooxaha Adduunka, waxaana kulankan oo ahaa lugtii labaad ay garoonka ku soo bilowday Martin Ødegaard.
Martin Ødegaard ayaa markii ugu horreysay ku soo bilowday safka hore ee kooxda Real Madrid, muddo 679 maalmood ah kaddib markii ay kooxdu la saxiixatay.
Real Madrid ayaa nus darsan goolal ah ku xaaqday kooxda Leonesa, waxaana ay goolasha ka kala heshay qeybtii hore 1’daqiiqo Mariano Mejia, 23’daqiiqo James Rodriguez iyo 42’daqiiqo Mariano Mejia, halka Leonesa ay hal gool iska soo celisay inta aan la aadin qeybta nasashada waxaana u dhaliyey Yeray Gonzalez, sidaas ayaana lagu kala nastay Real Madrid oo kulankan ku hoggaaminaysay 3-1.
Qeybtii labaad ee kulankan markii dib la isugu soo laabtay waxaan kulankiisii ugu horreeyey oo uu safto caawa gool u dhaliyey Real Madrid wiilka uu dhalay tababare Zidane ee Enzo Zidane, waxaana goolasha kale raacsaday 87’daqiiqo Mariano Mejia oo saddexleydiisa buuxsaday, kaasoo kulanka ka dhisay 5-1 ay ku gacsan sarreysay Los Blancos.
Waxaana dhammaadkii ciyaarta gool aan ula kac ahayn ka dhaliyey kooxdiisa Leonesa xiddiga Cesar Morgado, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 6-1.
Real Madrid ayaa lugtii hore ku soo adkaatay 7-1, waxaana ay taasi ka dhigan tahay inay caawa cel celis ahaan ku soo gaartay wareegga 16-ka Copa del Rey 13 goo iyo 2 gool.
GOOGOOSKA: Real Madrid vs Leonesa 6-1 (Zidane Jr oo kulan-bilowgiisii wacdaro ka dhigay)
Isku aadka Semi Final-ka EFL Cup….(Man United iyo Liverpool oo la kala leexiyay)